Al-Shabaab oo weeraray saldhig ku yaal Gobolka Waqooyi Bari Kenya - Awdinle Online
Al-Shabaab oo weeraray saldhig ku yaal Gobolka Waqooyi Bari Kenya
Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay in saacadihii la soo dhaafay ay weerar ku qaadeen saldhig Ciidamo Kenyan ah ku leeyihiin duleedka Magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi bari Kenya.
Saldhiga la weeraray ayaa waxaa uu ku yaal deegaan lagu magacaabo Gumure oo hoos taga magaalada Wajeer, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal u dhaxeeyay Ciidamada Kenya & Al-Shabaab.
Khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay dagaalka u dhaxeeyay labada dhinac, iyada oo dadka degaanka qaarkood la sheegay inay ka barakaceen melaha ku dhow dhow Saldhiga la weeraray.
Al-Shabaab oo sheegtay mas’uuliyada weerarkaas ayaa warar ay ku daabaceen Baraha ay ku leeyihiin internet-ka waxaa ay ku sheegteen inay la wareegeen degaanka Gumure, sidoo kalena ay Nolosha ku qabteen guddoomiyihii deegaanka oo Soomaali ah.
Saraakiisha Ciidamada Kenya ee Gobolka Waqooyi bari weli kama hadlin weerarkaas, hayeeshee bilihii la soo dhaafay ayaa weeraro noocaan oo kale ah waxaa ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigyo ay ku sugan yihiin Ciidamada Kenya oo ku yaal gobolka Waqooyi Bari.
Previous articleShirka IGAD oo furmaya & Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb-galaya
Next articleDhageyso:-Shabaabkii ugu badnaa oo culeys saaray degaannada Galmudug